သူတို့က Android ကို Kobo eReaders အားလုံးနီးပါးမှာ install လုပ်တယ် eReaders အားလုံး
သူတို့ဟာ Android ကို (Kobo eReaders) အားလုံးနီးပါးမှာ install လုပ်တယ်
Joaquín Garcia က | | စာဖတ်သူများ, Kobo, ပြုပြင်မွမ်းမံ
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့သည် developer တစ်ယောက်အနေဖြင့်မည်သို့အောင်မြင်ခဲ့သည်ကိုသင့်အားပြောပြခဲ့သည် Tolino Shine firmware စနစ်စိမျ့ Kobo Glo နှင့်တပ်ဆင်နိုင်ပါ Android ၏သန့်ရှင်းသောဗားရှင်း. သုတေသနပြုမှုများဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးယခုတွင်ပထမဆုံးတည်ဆောက်သူကိုပံ့ပိုးသူကစီမံနိုင်ခဲ့သည် Android ကို Kobo eReaders အားလုံးမှာ install လုပ်ပါနောက်ဆုံး eReader ကတည်းကအားလုံးနီးပါးတွင် Kobo Aura သည်ဤစီမံကိန်းသို့မ ၀ င်နိုင်သေးပါ။ Kobo အတွက်ဒီ Android အသစ်တီထွင်မှုကိုငါတို့အရင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်ယခင်စီမံကိန်းမှစတင်ခဲ့သော်လည်း၊ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Tolino Shine firmwareမဟုတ်သော devices များအဘို့ကတည်းက Kobo Glo သူတို့စနစ်တကျအလုပ်မလုပ်ပါဘူး
El firmware ကို လက်ရှိ debugged လုပ်ရန်လိုအပ်သော်လည်းလက်ရှိအခြေအနေမှာကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ လက်ရှိတွင် Kobo eReaders ၏အင်္ဂါရပ်များအားလုံးအပါအဝင်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်သည် the Kobo Aura HD ကိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် eReaders ၏။ The android ဗားရှင်း သူတို့ install လုပ်ဖို့စီမံထားတယ်ဆိုတာပါ အဆိုပါ 2.3.7ဗားရှင်းအဟောင်းနှင့်သို့သော်ပုံမှန်အားဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည့်အခြား operating system တစ်ခုရှိနိုင်မည့်အလားအလာကိုသိရန်အတွက်၎င်းသည်ကောင်းမွန်သည်။ ပုံများတွင်သင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းစနစ်သည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပြီးမည်သည့် application ကိုမဆိုတပ်ဆင်နိုင်သည် apk မှတဆင့်သော်လည်းကောင်း Play Store မှလည်းပါငါတို့ကိုခွင့်ပြုထားတဲ့ Kindle အက်ပလီကေးရှင်း၊ B&N မှ၊ La Casa del Libro မှသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ SD ကဒ်မှ ebooks များကို install လုပ်၍ ဖတ်နိုင်သည်။.
ကျွန်ုပ်တို့၏ Kobo Aura HD တွင် Android ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
ယခင်ဖြစ်စဉ်များကဲ့သို့ပင်ယခု Android version အတွက်တပ်ဆင်နိုင်သောတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ eReader ကိုဖွင့်ရန်၊ memory card ကိုရှာရန်သို့မဟုတ်hard drive ကို» eReader မှ၎င်းကို Android ဗားရှင်းနှင့် SD Card တစ်ခုသို့လဲပါ။ ၎င်းသည်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောသုံးစွဲသူများအတွက်မသင့်တော်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွမ်းကျင်သူများအတွက်သာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောလိမ့်မည်။ သူတို့တင်ပြသောမူကွဲသည်ခွင့်ပြုသည် dual-boot ပါ တစ်နည်းဆိုရသော်ကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်သည့်အခါ eReader ကိုဖွင့်သောအခါမည်သည့် system ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုလိုသည်ကိုမေးမြန်းလိမ့်မည်။
ဖတ်ပါ developer များ '' ကိုယ်ပိုင်မှတ်ချက်များဤစီမံကိန်းသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောဆက်နွယ်မှုတစ်ခုရှိလိမ့်မည်။ တစ်ဖက်တွင်အရင်းအမြစ်အနည်းငယ်သာရှိသည့်ကိရိယာများအတွက်ဖန်တီးထားခြင်းကြောင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်နိုင်သည့်လက်ရှိ Android ဗားရှင်းကိုတီထွင်ခြင်းဖြစ်ပြီးအခြားတစ်ဖက်တွင်မူ developer များက Android သည်၎င်းကိုပြုလုပ်သည် e-ink မျက်နှာပြင်များနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်နေသည့်အရာများနှင့်အဆင်ပြေစွာမနေပါနှင့်လက်ရှိကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းရန်၎င်းတို့ပြင်ဆင်နေသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုအပြင်ဒီဗားရှင်းရဲ့တပ်ဆင်မှုအပြောင်းအလဲကိုမျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာက eReaders တော်တော်များများအတွက်ဒုတိယသက်တမ်းကိုပေးနိုင်တယ်။ မထင်ဘူးလား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » hardware » စာဖတ်သူများ » သူတို့ဟာ Android ကို (Kobo eReaders) အားလုံးနီးပါးမှာ install လုပ်တယ်
ebook download ကဒ်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ